For Rent Or Sale | MyanmarReferral
Category Archives: For Rent or Sale
sell, rent, One family unit to rent in the Bronx ( New York ).
November 4, 2011Posted by lathaphotoke	Whoever interest in call me at 347 202 5431.
Close to subway2and5.
Posted in For Rent or Sale
အဖြူရောင်သံစဉ်နားဆင်ရန်	BBC Broadcast (တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန်)Sunday Morning:Saturday MorningFriday MorningThursday Morning: RFA Broadcast (တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန်)အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2013-05-19 01:29အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2013-05-18 17:29အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2013-05-18 14:29DVB TV broadcast	DVB TV - 16 May 2013 - 6pm News	National League for Democracy TV	PC-PolishFM-2	Archives	Select Month March 2012 (1)
MYANMAR CALENDAR	ငါးရှဉ့်ငှက်ပျောဖူး
ပါဝင်ပစ္စည်း ငါးရှဉ့်အကောင် - ၄၀ ကျပ်သား
ငှက်ပျောဖူး - တစ်ဖူး
ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့် ငါးရှဉ့်အကောင်လိုက်ကို မန်ကျည်းအနှစ်နဲ့ သေချာဆေးကြောသန့်စင်ပြီးတော့ ခေါင်းဖြတ်၊ ဗိုက်ခွဲဆေးကြောပြီး ဆားနဲ့ နနွင်းအနည်းငယ် ထည့်နယ်ပြီး ပြုတ်ထား လိုက်ပါ။ ငါးရှဉ့်နူးတဲ့အထိ ရေခန်းအောင် ပြုတ်ပေးပြီး၊ အေးသွားတဲ့အခါ အလယ်အရိုးကို ထုတ်ပစ်လိုက်ကာ အသားတွေချည်း ထွင်လိုက်ရပါမယ်။ ငှက်ပျောဖူးကိုလည်း အပြင်သားတွေခွာချပြီး အတွင်းပိုင်း အနုသား ရောက်မှ အလယ်ကနေ ထက်ခြမ်းခွဲ၊ ခပ်ရိတ်ရိတ်လေးလှီးပါမယ်။ လှီးပြီးသား ငှက်ပျောဖူးကို ရေစိမ်ထားပါ။
ကြက်သွန်ဖြူနီနဲ့ ဆီအရင်သတ်ပါမယ်။ ဆီသတ်ရာမှာ စပ်စပ်လေးစာချင်သူတွေက ငရုတ်သီးခွဲခြမ်းထည့်ပြီး သတ်လို့ရပါတယ်။ ဆီသတ်တဲ့အထဲကို ငံပြာရည်အနည်းငယ် ထည့်ပေးပြီး မွှေပြီးတာနဲ့ ပြုတ်ထားတဲ့ ငါးရှဉ့်ကို ထည့်ပါမယ်။ ငါးရှဉ့်ကို ငါးဘတ်မွှေ ချက်သလိုပါပဲ ကြေသွားအောင် မွှေပေးပါ။ ငါးရှဉ့်အသားဖတ်လေးတွေ ကြေသွားပြီး [...] Read More ယနေ့ ကြွလာမိတ်သဟာများ	www.sportwettenmeister.com
Top ArticlesMyanmarCelebrity	SAI SAI Birthday Show 2013 @ Myaw Sin Island	MTV	Sate Koo Ywet Kwyay - AThin Cho Swe	VOA Burmese TV	Rainbow News May 3rd Week 2013	>